နေ့: စက်တင်ဘာလ 26 2019
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 5.8 အခြေစိုက် Silivri အတွက်မြေငလျင် DCC အရွယ်အစားလွန်ပြီးနောက်။ ယင်းက forward İmamoğluဆန္ဒရှိအတိတ်ရဖို့ပြည်နယ်များပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများ, ငလျင်တွေ့ကြုံသူကသတိပေးခဲ့ဟုဆိုသည်။ အမျိုးသားရေးစည်းရုံးခြင်းမှဘာသာရပ်ငလျင်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ် [ပို ... ]
အဆိုပါစုစုပေါင်း 36 မြင်း purchasing အားဖြင့်ဥပဒေပြုပြီးစီးနှင့် Izmir သည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကိုဆောင်ခဲ့ 16 နည်းပြပြီးနောက်တစ်ခုလုံးကိုရထားစစ်ဆင်ရေး Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆုံးသတ်ထားရာ Izmir ၏မြို့နှင့်အတူ Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) အထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်။ [ပို ... ]
regattas, 27-29 စက်တင်ဘာလများက Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ပွဲတော်များ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တှငျကငျြးပခဲ့အဖြစ်ဖျော်ဖြေပွဲ, ရှိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသာယာသောဖြစ်ရပ်ဆောင်တတ်၏လိမ့်မည်။ ယခုနှစ်တွင်ပွဲတော်ရဲ့အဓိကဖြစ်ရပ်စင်မြင့် Izmir တတိယအကြိမ် [ပို ... ]
အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားကစားသမား Batuhan မစ္စတာ Grant ကရဲ့ Eruygur, လမ်းရထားလူမျိုးခဲ့သည်
Eruygur ရဲ့ဆုရအားကစားသမား Batuhan မစ္စတာ Grant က, ဥရောပအားကစားအပတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်းရပ် Eminonu-Karakoy လမ်းရထားအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။ အဘယ်သူသည်ပထမဦးဆုံး Eruygur ခဲ့ finish ကိုလိုင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ဥရောပအားကစားအပတ်၏နံပါတ် 23-30 စက်တင်ဘာလဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ [ပို ... ]
အဆိုပါဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း xnumx ၏အဖှဲ့အစညျးနှငျ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen စုပေါင်းသဘောတူညီချက်။ ရဲ့အစည်းအဝေး Eskisehir နှင့် Afyonkarahisar Afyonkarahisar ဌာနခွဲများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ကာဣနန်ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mehmet Yildirim နှင့်အီဘရာဟင် Uslu တင်ဆက်မှု [ပို ... ]
2 ။ Alanya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးပွဲတော်စတင်
သော festival.com.t2များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Alanya မြူနီစီပယ်ကစီစဉ်ပါလိမ့်မည်။ Alanya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးပွဲတော်မနက်ဖြန်ကစတင်ခဲ့သည်။ Alanya ထံမှ 27 လူတွေတက်ရောက်ခြင်းအပါအဝင်, စက်တင်ဘာလ Kestel အကြားကျင်းပလိမ့်မည်သည့် 29-35 300 ပွဲတော်။ သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 27 နာရီ [ပို ... ]
တစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်သားသမီးများ၏အသွားအလာကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုသတိမှီဖို့ကျောင်းများအတွက်သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေး Bilecik ၏မြူနီစီပယ်ကပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Yavuz အားဖြင့်စာသင်ခန်းထဲမှာကလေးတွေကိုပေးတဲ့ပညာရေးအများအပြားခေါင်းစဉ်အတွက် Bilecik မြူနီစီပယ် Project မှထုတ်လုပ်မှု Center ကအရာရှိ Hakan အကြောင်းအရာများ [ပို ... ]
အဆိုပါ Anatolian ကားလမ်းပေါ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း
Izmit အရှေ့လမ်းဆုံ, bodywork ပြုပြင်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်တူရကီနှင့် Adapazari ဘောလုံးဒိုင်ဦးတည်ချက်တို့အကြား Anatolian ကားလမ်း, အောက်တိုဘာလသည်အထိကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 15 21.00-06.00 မှနာရီကိုပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်။ မြို့ဝန်ရဲ့ရုံးကနေကြေညာချက်အရ, အဝေးပြေး 1 ။ ပင်လယ်ကွေ့၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
တူရကီအတွက် Start မှပထမဦးဆုံးအချိန်ကားဆိုင်ကယ် Service ကိုပေးထားပြီ
အဆိုပါတူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးက "30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံ Park က" စက်ဘီးငှားရမ်း application ကိုစတင်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်စေဖွင့်လှစ်။ မြို့ထဲမှာဘတ်စ်ကားယာဉ်ရပ်နားဧရိယာ၏ Starting Point သို့ဖြစ်ခြင်းအပြင်နှင့်အရှည်သစ်ကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကို2500 ၏မြို့တော်အတွင်းအရပ်တို့ကိုတထောင်မီတာမကြာခဏ [ပို ... ]
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်လမ်းကြောင်း: အ 2011 ကသမ္မတအာဒိုဂန် '' အရူးစီမံကိန်းကို '' ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်လျော်သောလမ်းကြောင်းများ၏နာမကိုမိတ်ဆက်နှင့်စီမံကိန်းများအတွက် EIA ကိုစတင်ခဲ့သော EIA ကိုလျှောက်လွှာဖိုင်မှတ်တမ်းအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခင်က51 Indie လမ်းကြောင်းပေးအပ်သည်။ စီမံကိန်းအရ [ပို ... ]
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့လယ်မှာထွက်သယ်ဆောင်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့်တစ်ခုအဆုံးမှလာမယ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရဲဌာန PTT ကİsmetpaşaလမ်းနှင့်အတူလမ်းကွန်နက်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဗဟိုရောက်ရှိသည်အထိမြို့တော်ပြည်နယ်ဆေးရုံPalandöken feverishly အဆိုပါ access ကိုလမ်းမပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေလမ်းလျှောက် [ပို ... ]
အဆိုပါ 1969 အတွက် DHL အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက် 50 နေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သောအိတ်ကိုလွှဲပြောင်းရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူထွက် set လေကြောင်းကုန်တင်သင်္ဘောများအတွက်ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ ဝက်ကုမ္ပဏီ၏ယနေ့ဆန်းသစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရာစုအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ၏ခေါင်းဆောင်မှုယူဆ 220 [ပို ... ]
အဆိုပါ Bilecik အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတုံ့ပြန်မှု: 'အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းချို့တဲ့အပေါ် YHT ပြောပြကြသည်မဟုတ်လော' '
ယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖော်ပြချက် "နည်းပညာပိုင်းအသိသာကျွန်တော်တစ်နည်းနည်းများလွန်းအစာရှောင်သည် သွား. မထင်ပေမယ့်" Bilecik Bozüyükအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကိုနှစ်ခုစက်လုပ်သမားရဲ့သေခြင်း Bilecik အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bilal Senturk ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူရထားလမ်းညွှန်များ၏လွဲသွား၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အငြင်းအခုန်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းအတွက်ဆက်လက်အဖြစ်သမိုင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးစီမံကိန်း၏တူရကီသမ္မတနိုင်ငံလူသန်းပေါင်းများစွာတို့ကနီးကပ်စွာနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာလေလံ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုaçıklanmazkenကွားရှည်လျားသောသမိုင်း 2019 နေသော်လည်းလည်းဝေဖန်မှုများ [ပို ... ]
အဖြစ် audio ပုံပြင်လူသိများသည်ရလဒ်များကိုအမျိုးအစားများနှင့်ရှည်လျားသောအဆင့်မှစွပ်စွဲမရနိုင်, ကဒါခေါ်ချည်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အလုပ်၏နှောင့်နှေးနေတဲ့စကားလုံးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လာမယ့်နှင့်ပြည်နယ်များ၏သဘောပေါက်၏အစီအစဉ်အတွက်ဟုဆိုသည်။ Sanliurfa ၏လူများ TRAMBUS မျှော်လင့်ချက်များလည်းဤပုံပြင်၏ဆင်တူသည်။ [ပို ... ]
အီရန်အတွက်ခရီးသည်တင်ရထားများလွဲသွား, Zahedan-တီဟီရန်ပျံသန်းမှု။ အနည်းဆုံး4လူများမတော်တဆမှုသေဆုံး, 35 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Zahedan ၏မြို့၌တွေ့başknetအီရန်နိုင်ငံ၏ Sistan နဲ့တဲ့ Baluchestan ခရိုင်အကြားခရီးသည်တင်ရထားပြေးဆွဲမှုမရှိ, တီဟီရန် [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan, 'winnin ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမတက်ကြွ' '
Trans-ဥရောပပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်အရည်အသွေးမြင့်၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် binding Halkalı-Kapıkulမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း Çerkezköy-Kapıkulပုဒ်မဆောက်လုပ်ရေးသဲအခမ်းအနားအဟောင်း elm မီးရထားဘူတာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 25 စက်တင်ဘာလ 2019 အခမ်းအနား၏အမှန်တကယ်ရက်စွဲ; ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 26 1920 နာဖီးဥက္ကဋ္ဌအစ္စမေးလ် Fazil Pasha အတွက်Eskişehir သွား. Afyon-Usak ရထားလမ်းဟာတူရကီအစိုးရကိုယ်စားကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ရထားလမ်းနှင့်အခြားဆက်စပ်သတင်းများယနေ့တွင် haberlertarih အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်: 26 စက်တင်ဘာလ 1920 ဥက္ကဋ္ဌနာဖီး [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (190) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)